China Double frequency kutendeuka mutsago kurongedza muchina Kugadzira uye Fekitori | Yuanhengtong
Makuriro ekushandisa Inonyanya kushandiswa kune hari base, wolfberry uye zvimwe zvakajairwa zvinhu zvine tireyi mune yakasimba chimiro Anoshanda maficha 1. Dhiri frequency frequency yekudzora, bhegi kureba kunoiswa uye kucheka nekukasira, hapana chikonzero chekugadzirisa chisina chinhu, chengetedza nguva uye chengetedza firimu. 2.Meseji yemunhu-muchina interface, inyore uye inokurumidza paramende kumisikidza. 3. Kukanganisa kuzviongorora-basa, kukanganisa kuratidza kuri pachena. 4. Kukwidziridzwa kwepamusoro photoelectric ziso ruvara rwechokwadi kuteedzera, kuiswa chisimbiso chaiko uye nzvimbo yekucheka. 5. T ...
Inonyanya kushandiswa muhari yepasi, wolfberry uye zvimwe zvinhu zvakajairwa netray mune yakasimba chimiro
1. Double frequency converter control, bhegi kureba kwakatemwa uye kucheka ipapo ipapo, hapana chikonzero chekugadzirisa chisina chinhu, chengetedza nguva uye chengetedza firimu.
2.Meseji yemunhu-muchina interface, inyore uye inokurumidza paramende kumisikidza.
3. Kukanganisa kuzviongorora-basa, kukanganisa kuratidza kuri pachena.
4. Kukwidziridzwa kwepamusoro photoelectric ziso ruvara rwechokwadi kuteedzera, kuiswa chisimbiso chaiko uye nzvimbo yekucheka.
5.Tembiricha yakazvimirira PID kudzora, inokodzera akasiyana siyana envelopu envelop.
6.Position mira basa, hapana tsvimbo banga, hapana firimu.
7. Iyo yekufambisa nzira iri nyore, yakagadzikana uye nyore kuchengeta.
1. Iyo mukombe vhoriyamu kurongedza muchina unogona otomatiki kupedzisa yekumhanyisa yekufambisa yekufambisa, kuyera, kuzadza, kugadzira bhegi, kudhinda zuva, kupisa chisimbiso, kucheka uye zvimwe zvigadzirwa.
2.Muchina wekupakata unotora inotsika mota drive system.
3. Kuti uve nechokwadi cheyakaenzana urefu hwehombodo yekupakira, iyo fotoelectric sensor system ine hunyoro hwepamusoro inoshandiswa kuona otomatiki kurongedza kwepakeji firimu.
4. Muchina wekurongedza une komputa yekudzora system.
5. Isu takaisa tembiricha yenguva dzose yekupisa sisitimu kuona kuti tembiricha yakadzikama uye tembiricha inochengetwa pa + / - 1 ℃.
6. Izvo zvemagetsi uye pneumatic zvikamu zvemuchina zvinopihwa nevakavimbika vatengesi avo vakabatira kwemakore mazhinji, izvo kwete kwete chete zvinoita kuti mhando yemuchina, asi zvakare inochengetedza mutengo wekutenga.
7. Bhegi nhamba uye nhamba yepakeji inogona kuverengerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Izvo zvinoshanda kune kurongedzwa kwechikafu chakawedzerwa, chikafu chekuzorora, nzungu, vise uye michero, mbeu, mupunga, munyu, mhodzi, monosodium glutamate, shuga, bhinzi, chibage, bhisikiti, sikuruwa, Hardware, nzara, nzungu, bhaudhi uye imwe granular. uye zvinhu zvakaoma.
Rakafara Of kavha Firimu 450mm
Kureba Length 70-350mm
Muenzaniso-Kugadzira Upamhi 180mm
Zvigadzirwa Zvakanyanya 100mm
Firimu Dhayamita 320mm
Kurongedza Speed 20-120bag / min
Zvinodikanwa ZveMagetsi 380V, 50 / 60HZ
Kavha Zvekushandisa OPP / Pe, Pe / PT, PAPE / PE, BOPP / PE
Kunopindirana Dimensions 480 （L) * 1060 (W) * 1500 (H)
Machine Kurema 120KG
Pashure: Kudzoreredza kurongedza muchina MSW650
Zvadaro: Kudzoreredza kurongedza muchina MSW450